အညွှန်း - ဝီကီပီးဒီးယား
"အညွှန်းဆိုတာ စာအုပ်တစ်အုပ်ရဲ့ လမ်းညွှန်မြေပုံပါ့၊ စာရေးဆရာ တင်ပြချင်တဲ့ အိုင်ဒီယာတွေကို အရယူဖို့ မုခ်တံခါးဝ။"
index ဆိုတာ "ညွှန်ပြတဲ့အရာ၊ ထုတ်ဖော်ပြတဲ့အရာ၊ ရွေးထုတ်ပြတဲ့အရာ" လို့ အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်တဲ့ ပုံစံတူ လက်တင်(Latin)နာမ်စကားလုံးကနေ ဆင်းသက်လာသည်။ ဒီလက်တင် နာမ်စကားလုံးဟာ ရှေ့ဆက် in- နဲ့ dicare ဆိုတဲ့ လက်တင်ကြိယာ ပုဒ်ရင်းတွေကနေ ဆင်းသက်လာပါသည်။ dicare ရဲ့ အဓိပ္ပာယ်က 'ပြသသည်' ပါတဲ့၊ in- ကိုတော့ အပြင်ဘက် နေရာတစ်ခုကနေပြီး ကန့်သတ်အကွာအဝေးအတွင်းမှာရှိတဲ့ တစ်စုံတစ်ခုဆီကို သွားတဲ့ လမ်းကြောင်းကို ညွှန်ပြဖို့ သုံးပါသည်။ indicare ဆိုတဲ့ ကြိယာက 'အသိပေးသည်၊ ညွှန်ပြသည်၊ ထုတ်ဖော်ပြသည်၊ ကြေညာသည်၊ ပဓာနကျသော အချက်အလက်ကို ပေးအပ်သည်' ဟု ဆိုလိုပါသည်။
လက်တင် အဘိဓာန်အကျယ်မှာ 'index' စကားလုံးဟာ အမှတ်လက္ခဏာ၊ သင်္ကေတ၊ လမ်းညွှန်မှတ်တိုင်၊ ထုတ်ဖော်ပြောပြတဲ့ ဒါမှမဟုတ် ညွှန်ပြတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်၊ ရှေးစာခွေလိပ်ရဲ့ ခေါင်းစဉ်စာရွက်ပိုင်းဆိုတဲ့ ညွှန်ပြတတ်တဲ့ အမျိုးအစားတွေကို ညွှန်းပါသည်။ ဒီတော့ 'index = အညွှန်း' ဆိုသည် စာအုပ်ရဲ့ နာမည်၊ စာအုပ်ရဲ့ အနှစ်ချုပ် ဒါမှမဟုတ် စာအုပ်ထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို အကျဉ်းချုပ် တင်ပြပေးတဲ့ မာတိကာ၊ စာအုပ်စာရင်း၊ စာရေးဆရာစာရင်း၊ ကျောက်စာအစရှိတဲ့ ရေးထွင်းစာတွေ ဒါမှမဟုတ် ရုပ်ပုံတွေရဲ့ အောက်မှာ ရေးထားတဲ့ ပုံစာ၊ သရုပ်ဖော်စာတွေကို ရည်ညွှန်းကြောင်း တွေ့လာရပါသည်။ ဒီဖွင့်ဆိုချက်တွေထဲက တချို့သော ဖွင့်ဆိုချက်တွေကို အခု ကျွန်ုပ်တို့ခေတ် ရောက်တဲ့အထိ ထိန်းသိမ်းသုံးစွဲလာခဲ့ကြပါတယ်။ ပြီးတော့ တခြားဖွင့်ဆိုချက်တွေကိုလည်း ဒီစကားလုံးထဲ ထည့်သွင်းလာကြပါသည်။
ရှေးဟောင်းရောမခေတ်တုန်းကတော့ အညွှန်းဆိုတာ ကျူစာခွေလိပ်တွေမှာ ချိတ်ဆွဲထားတဲ့ ခေါင်းစဉ်စာရွက်ပိုင်းပါ။ စာအုပ်စင်တွေမှာ အလွယ်တကူ ခွဲခြားလို့ရအောင် ကျမ်းနာမည်နဲ့ စာရေးဆရာနာမည်တွေကို အဲဒီ ခေါင်းစဉ်စာရွက်ပိုင်းပေါ်မှာ ရေးမှတ်ထားကြပါသည်။ စာခွေလိပ်တွေမှာ စာမျက်နှာလည်း မပါ၊ အင်္ဂါနံပါတ်လည်း မပါ၊ စာကြောင်း အရေအတွက်ပြ ကိန်းဂဏန်းလည်း မပါပါဘူး။ ပုံနှိပ်စက် တီထွင်မှုနဲ့အတူ ပထမဆုံးသော အညွှန်းတွေကို စတင်ကောက်ခဲ့ကြပါသည်။ ခေတ်သစ်သဘောတရားအနေနဲ့ ပြောရရင် အဲဒီတုန်းက အညွှန်းတွေဟာ စာအုပ်ထဲက နာမည်တွေနဲ့ အကြောင်းအရာတွေရဲ့ တည်နေရာအတိအကျကို ပြ မပေးနိုင်ပါဘူး။ ဒီလို အတိအကျ ပြပေးနိုင်ဖို့ဆိုတာ ပုံနှိပ်ခေတ် မတိုင်ခင်ကဆိုတော့ မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာပါ။ နာမည်တွေ၊ အကြောင်းအရာတွေနဲ့ စကားလုံးတွေကို စီစဉ်ထားတဲ့ အက္ခရာစဉ် စာရင်းတွေကို (၁၉) ရာစု မတိုင်ခင်အထိ လက်တင်ဝေါဟာရနဲ့ index mominum, index rerum, index verborum လို့ ရည်ညွှန်းပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
Oxford English အဘိဓာန်ကတော့ index (1938) ကို 'လက်ညိုး၊ ညွှန်တံ'အဖြစ် စာရင်းတင်ထားပါသည်။ ပြီးတော့ 'ညွှန်တံအဖြစ် အသုံးပြုတဲ့ ပစ္စည်း'အဖြစ်လည်း စာရင်းပြုစု ထားပါသည်။ (1594)။ index ရဲ့ ကြိယာပုံစံကို ပထမဆုံး အသုံးပြုတာကတော့ '(စာအုပ် အစရှိ သည်ကို) အညွှန်းဖြင့် ဖြည့်ဆည်းပေးသည်' ဖြစ်ပါသည်။ (1720)။ (1761) ခုနှစ်မှာ '(စကားလုံး၊ နာမည် အစရှိသည်တို့ကို) အညွှန်းဖြင့် ထည့်သွင်းသည်' လို့ အသုံးပြုပါသည်။ index ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရရင်းမြစ်ကနေ ဆင်းသက်လာတဲ့ ဝေါဟာရတွေက indexical (1828), indexer (1856), indexed (1872), indexing (1887), indexible (1951), indexation (1960) တို့ ဖြစ်ပါသည်။ Oxford English အဘိဓာန်မှာ index-hunting (1699), index-hunter (1751), index-learning (1728), index-rakers (1867), index pips (1899) တို့ကိုလည်း ထည့်သွင်း စာရင်းပြုစုထားပါသည်။ 
Hans H. Wellisch က အညွှန်းကို 'ညွှန်းဆိုထားသည့် စာရွက်စာတမ်းတွင် ပါရှိသည့် အချက်အလက်များနှင့် အစီအစဉ် ကွဲပြားခြားနားသော၊ စာရွက်စာတမ်းအတွင်းရှိ အချက်အလက်များကို အသုံးပြုသူတို့ ရှာဖွေနိုင်စေရန် စီစဉ်ထားသော၊ အက္ခရာစဉ်အားဖြင့်ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် အခြားနည်းအားဖြင့်ဖြစ်စေ အညွှန်းမှတ်တမ်းတွေကို ရှေ့နောက်နေရာတကျ စီစဉ်ထားရှိခြင်း' လို့ ဖွင့်ဆိုပါတယ်။ Nancy C. Mulvany ကတော့ ဟောဒီလို တင်ပြပေးထားပါတယ်။ 'အိုင်ဒီယာတွေနဲ့ အချက်အလက်တွေကို ရယူဖို့ ဝင်ပေါက်တံခါးကို အညွှန်းက ပံ့ပိုးပေးပါတယ်။ စာအုပ်ရဲ့ နောက်ကျောမှာ ပါတာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒါမှမဟုတ် CD-ROM နဲ့ လာတာပဲဖြစ်ဖြစ် အညွှန်းဆိုတာ ဗဟုသုတအဆောက်အဦတစ်ခုပါ။ အညွှန်းအချက်အလက်တွေကို သုံးစွဲခွင့်ရတာဟာ စာအုပ်စာပေတွေဆီကို အညွှန်းကောက်သူတွေက သယ်ယူလာတဲ့ ဖြည့်စွက်အကျိုးအမြတ်ပါ။
Chicago Manual of Style ကတော့ ဟောဒီလို ပြောထားပါတယ်။ 'စနစ်တကျ စီစဉ်နေရာချထားတဲ့၊ စာအုပ်အစ မာတိကာတို့၊ အခြားသော လမ်းညွှန်အကူအညီတို့နဲ့ မတူဘဲ အသေးစိတ်တွေ ပံ့ပိုးထားတဲ့ အညွှန်းဆိုတာ အကျိုးအမြတ် မရှိတဲ့ မေးခွန်းတွေ၊ ရှာဖွေဖို့ မရည်ရွယ်တဲ့ ရလဒ်တွေနဲ့ ဆန့်ကျင်ပြီး၊ ရှာဖွေလို့ရတဲ့ စာတွေနဲ့ ပံ့ပိုးထားတဲ့၊ ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ အာမခံချက်တစ်ခု'လည်းဖြစ်ပါတယ်။ အညွှန်းကောင်းတွေဟာ သော့ချက်စကားရပ်နဲ့၁ အကြောင်းအရာ/ ခေါင်းစဉ် အားလုံးကို စုစည်းပေးထားပါတယ် (သဘောတရားနဲ့ ခေါင်းစဉ်အပေါ် အခြေတည်ထားတဲ့ အကြောင်းအရာရဲ့ အောက်မှာ အဓိကဝေါဟာရတွေကို စုစည်းထားတာပါ)၊ သူတို့ကို အက္ခရာစဉ်အလိုက် နေရာချထားပါတယ်၊ သက်ဆိုင်ရာ ဝေါဟာရတွေချင်း အပြန်အလှန် ညွှန်းဆိုထားပါတယ်၊ သက်ဆိုင်ရာ စာမျက်နှာ ဒါမှမဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ အညွှန်းတည်နေရာတွေကို၂ ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ အပင်ပန်းခံ လုပ်ဆောင်ရတဲ့ ဒီဉာဏအလုပ်ဟာ စာရွက်နဲ့ ထုတ်ထားတာကို ဖတ်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ e-book ကို ဖတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ စာအုပ်အထူကြီးကို ဖတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ စာအုပ်အပါးလေး ကို ဖတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် စာဖတ်သူတွေ အားလုံးကို အလုပ်အကျွေး ပြုပါတယ်။ အညွှန်းဆိုတာ 'အညွှန်းမှတ်တမ်း(entry)တွေကအစီအစဉ်တကျ နေရာချထားတာပါ။ စာရွက်စာတမ်းအတွင်းမှာ ပါရှိတဲ့ (သို့မဟုတ်) စာပေါင်းချုပ်အတွင်းက သီးသန့်စာရွက်စာတမ်းထဲမှာ ပါရှိတဲ့ အချက်အလက်တွေကို အသုံးပြုသူတွေ ရှာဖွေနိုင်စေဖို့ စီစဉ်ထားတဲ့အရာ"ပါ။ နိုင်ငံတကာ စံသတ်မှတ်အဖွဲ့အစည်းဟာ အညွှန်းမှာ ပါဝင်ရမယ့်အရာတွေ၊ အညွှန်းတွေကို ဖွဲ့စည်းပုံ၊ တင်ပြပုံတွေကို ပံ့ပိုးပေးပါတယ်။ အညွှန်းမှတ်တမ်းတွေမှာ အသုံးပြုတဲ့ အညွှန်းခေါင်းစီး၊ အညွှန်းခေါင်းစီးခွဲတွေက ရွေးချယ်မှုနဲ့ သူတို့ကို ထားရှိရမယ့် ပုံစံတွေကို ထုတ်ပြန် ကြေညာပါတယ်။
'အညွှန်းဆိုတာ စကားလုံးတွေ၊ စကားစုတွေရဲ့ စာရင်း (အညွှန်းခေါင်းစီးတွေ၊ အညွှန်းခေါင်းစီးခွဲတွေကို ရည်ညွှန်း)၊ ပြီးတော့ စာရွက်စာတမ်းတစ်ခု အတွင်းမှာ ရှာဖွေနိုင်တဲ့ အညွှန်းခေါင်းစီးနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ အသုံးဝင်တဲ့ အချက်အလက်တွေဆီကို ဆက်စပ်ညွှန်ပြတာတွေပါ (အညွှန်းတည်နေရာတွေကို ရည်ညွှန်း)။ စာအုပ်နောက်ပိုင်းမှာ ပါရှိတဲ့ အညွှန်းထဲက အညွှန်းခေါင်းစီးမှာ လူနာမည်တွေ၊ နေရာနာမည်တွေ၊ အဖြစ်အပျက်နာမည်တွေ၊ အညွှန်းကောက်သူက ဆက်စပ်မှုအဖြစ် ရွေးချယ်ထားတဲ့ အယူအဆ သဘောထားတွေ၊ ဒီစာအုပ်ကို ဖတ်ဖြစ်လောက်တဲ့ စာဖတ်သူတွေ စိတ်ဝင်စားတတ်တဲ့အရာတွေရဲ့ နာမည်တွေကို ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ အညွှန်း တည်နေရာကတော့ ပုံမှန်အားဖြင့် စာမျက်နှာတွေ၊ စာပိုဒ်နံပါတ်တွေ ဒါမှမဟုတ် အခန်းနံပါတ်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ပင်ဂွင်းစွယ်စုံကျမ်းကတော့ အညွှန်းလုပ်ငန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး 'စာအုပ်တွေနဲ့ တခြားသော ပုံနှိပ် ထုတ်ဝေတာတွေထဲမှာပါတဲ့ စကားလုံးတွေ၊ နာမည်တွေ၊ အယူအဆတွေရဲ့ တည်နေရာကို စနစ်တကျ လမ်းညွှန်မှုကို ပြုစုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အညွှန်းတစ်ခုမှာ အညွှန်းမှတ်တမ်းစာရင်း ပါရှိပါတယ်။ အညွှန်းပုဒ်တိုင်းကို (သင့်တော်တဲ့ စကားစု ဒါမှမဟုတ် အညွှန်းခေါင်းစီးခွဲတွေ ဒါမှမဟုတ် အဲဒီ နှစ်မျိုးလုံး အတူတွဲ ပါရှိတဲ့) အညွှန်းခေါင်းစီးနဲ့ အနည်းဆုံး စာမျက်နှာတစ်ခု ဒါမှမဟုတ် ပြန်လှန်ညွှန်း၁တစ်ခုတို့နဲ့ ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ တန်ဖိုးရှိပြီး ဖတ်ရှုသူတွေ စိတ်ကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ အညွှန်းတစ်ခုကို ကောက်ဖို့အတွက် ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူးအကြံဉာဏ်နဲ့ စဉ်းစားဆင်ခြင်မှုတွေက မရှိမဖြစ် အရေးပါတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။'၂ လို့ ရှင်းလင်းဖော်ပြထားပါတယ်။
↑ မြန်မာ့စာပေ နယ်ပယ်မှာတော့ 'အညွှန်း'ကို "အညွှန်း - န /အညွှန်း/ ၁၊ တစုံတရာကို လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရန် သို့မဟုတ် သိနားလည်စေရန် ထုတ်ဖော် ပြောဆို ရေးသားချက်။ '၎င်းဆေးသောက်ရန် အညွှန်း ပုလင်း၌ ပါသည်။ ပါဏာဝု။ ၂၇၄။ ၂၊ စာရင်း၊ ကျမ်းစသည်တွင် ပါဝင်သောအခန်း၊ ခေါင်းစဉ်စသည်ကို စာမျက်နှာ အစဉ်အတိုင်း ညွှန်ပြသော ဇယား" လို့ ဖွင့်ဆိုထားပါသည်။ - မြန်မာအဘိဓာန်အကျဉ်းချုပ်၊ အတွဲ ၅၊ အ၊ ၅၅။ လက်ရှိ စံပြုနေကြတဲ့ မြန်မာအဘိဓာန်မှာတော့ 'အညွှန်း'ကို "အညွှန်း၊ န - ၁၊ မည်သို့ ပြုမူဆောင်ရွက်ရမည်ဟု ညွှန်ပြရေးသားချက်။ ၂၊ စာအုပ်ပါ အကြောင်းအရာကို ရှာဖွေရ လွယ်အောင် ညွှန်ပြချက်" လို့ ဖွင့်ဆိုပါသည်။ - မြန်မာအဘိဓာန်၊ ဒု၊ ၄၀၅။ အဘိဓာန် ၂ မျိုးလုံးရဲ့ ဒုတိယဖွင့်ဆိုချက်တွေဟာ အခုတင်ပြနေတဲ့ index နဲ့ ထပ်တူ သဘောရပါသည်။ - ဘာသာပြန်သူ သိရီ (သင်္ဂဇာမြေ)Knowledge First.
↑ Hans H. Wellisch, Indexing from A to Z
↑ Hans H. Wellisch, Indexing from A to Z (pp. 159-70)
↑ Nancy C. Mulvany, Indexing of Books
↑ သော့ချက်စကားရပ် = key term
↑ အညွှန်းတည်နေရာ = locator, အမှန်ကတော့ locator ဆိုတာ တစ်ခုခုကို ရှာဖွေတဲ့နေရာမှာ ကူညီပေးတဲ့ ပစ္စည်း ဒါမှမဟုတ် နည်းစနစ်ကို ပြောတာပါ။ ဒီစာအုပ်မှာတော့ အဆင်ပြေအောင် 'အညွှန်းတည်နေရာ'လို့ပဲ ပြန်ဆိုထားပါတယ်။ - ဘာသာပြန်သူ သိရီ (သင်္ဂဇာမြေ) Knowledge First.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အညွှန်း&oldid=401379" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၅ မေ ၂၀၁၈၊ ၀၉:၄၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။